UkuNgena kweBlog: Ukunyanzeliswa, iNethiwekhi yeNtlalontle yoPhuhliso lweSoftware kunye neeNgcali zokuSebenzisa | Martech Zone
UkuBhlog-Ukuthintela: Ukunyanzeliswa, iNethiwekhi yeNtlalontle yoPhuhliso lweSoftware kunye neeNgcali zokuSebenzisa
NgeCawa, Oktobha 21, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sele lixesha oko thintela ibhlog kwaye ndakhunjuzwa ngeeveki ezimbalwa ezidlulileyo nguTom Humbarger ka Catalyze. Utshintsho lomsebenzi kunye nekhontrakthi esecaleni ilinciphise kakhulu ixesha endinokulichitha kwindawo yam yonke imihla. Ngombulelo, oko kuqala ukujika ngoku.
Kuqala, ezinye iiNgxelo ngeBlog-Tip yangaphambili
Ndifumene ilizwi libuya kuAndré eLendo.org ukuba ifayile ye- utshintsho endilucebisayo kwindawo yakhe kukhokelele kukonyuka okumangalisayo kwiindwendwe nakwimibono yephepha. UAndré wayenabatyeleli abangaqhelekanga abangama-290 ngosuku nangeephepha ezingama-700 ezijongwa ngaphambi kolo tshintsho. Ngoku, Lendo.org Unayo I-1200 yeendwendwe ezizodwa ngemini, kunye ne-3000 yokujonga iphepha!!!
Namhlanje, ndiza kucebisa ICatalyze-Uluntu lwaBahlalutyi beShishini kunye neengcali ze-UX -Bantu abaDala bayila iSoftware engaqhelekanga. ICatalyze ihamba ngaphaya kwebhlog, iyinyani yenethiwekhi yezentlalo ke oku kuya kuba ngumceli mngeni omkhulu! UTom undixinile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ebelinde ngomonde!
Unokuyihleka le nto, kodwa ngokunyanisekileyo kuye kwafuneka ukuba ndimbe ndijikeleze ukuze ndifumanise ukuba "uX" uthetha ntoni! Khange ndiqonde ukuba sisifinyezo samava omsebenzisi. Andiqinisekanga ukuba abantu bakhangela "UX"… ungafuna ukubhala "Amava oMsebenzisi" kwizihloko zephepha, njl. Kwiphepha, unokufuna ukusebenzisa> isichazi> iithegi: UX ukwenzela ukuba iinjini zokukhangela zikhase zombini igama kunye nesifinyezo.
Iya kuba ngumceli mngeni, kodwa ndingakukhuthaza ngokwenene ukuba ubonelele ngesiqhagamshelo sokondla kwiphepha lakho lasekhaya. Ukuba unokukhulisa ukondla okubanzi kwezithuba zamva nje, iingxoxo zeforum zamva nje, kwaye mhlawumbi neziganeko zamva nje-ezinokuthi zibonelele ngexabiso elininzi kubafundi.
Kwakwelo nqaku linye, ndiye ndabona ukuba ndingafumana i-RSS feed kwibhlog yakho kodwa ayifakwanga kwintloko yakho yokudityaniswa kwezikhangeli. Zonke iibrawuza zamva nje ziya kujonga ukujongwa kwekhonkco kwi-RSS kwi-header yamaphepha akho kwaye ziya kubonisa ngokuzenzekelayo iqhosha lokubhalisela i-RSS kwi-Bar yeedilesi. Nantsi indlela ikhowudi ebonakala ngayo:
Nantsi indlela ejongeka ngayo xa usiya kwiphepha lam kwiFirefox:
Nantsi indlela elikhangeleka ngayo iphepha lakho:
Ukuba uyenza lula ukuba abantu babhalise kwindawo yakho, uya kufumana ababhalisile ngakumbi. Qiniseka ukuba usebenzisa isixhobo esifana nesi Isongezelelo Ukujonga ukuba bangaphi ababhalisile onabo.
Ukuba bendiyiBhotile kaGoogle nditshayela iphepha lebhlog yakho, ndingabeka iphepha kwiphepha lakho njenge- "Blog thumbarger"… mhlawumbi ayingamagama aphambili owawufuna. Ukuba ungazitshintsha izihloko zakho zephepha zibe sisihloko sephepha, kwi eli tyala: Ngaba uyiNgcinga yokuYila? Catalyze Ubulumko baNgoku nguTom Humbarger
Iinjini yokukhangela zithathela ingqalelo indlela umxholo owakhiwe ngayo kumaphepha akho. Kwimeko yezithuba zakho zeblogi, isihloko sesithuba nje sinxibelelwano kunye neklasi = "siblog_PostTitle". Ayizukuxelela i-Injini yokukhangela ukuba akukho nto ibalulekileyo malunga nesihloko. Ukuba uyakwazi ukungena kwisibindi sesicelo sakho, ndiza kuqinisekisa ukuba ndinee-tag zentloko, nokuba> h1> okanye> h2> iithegi ezifaka isihloko seposti yam. Ndingacebisa ukuba ubhale iiposti usebenzisa iithegi zentloko ngokunjalo.
Mhlawumbi iphepha elinamathuba amaninzi likhasi lakho lasekhaya. Eli liphepha elinye elikhulu lekhonkco xa libonwa yi-Injini yokukhangela. Ukuba yayiliphepha elifomathiweyo elinesihloko kunye neengcaphuno ezimakwe ngokufanelekileyo, uya kuba nakho ukufumana loo mxholo uboniswe ngcono.
Yakho ikhalenda iphepha kukho Rhuma ikhonkco .. kodwa akukho nto kwikhonkco ukuze urhume kuyo. Ndiya kuqinisekisa ukuba uchaza izihloko zamaphepha njengoko bendibhala malunga nezihloko zebhlog.
Ukumba kulwakhiwo lwephepha lakho, ndibona into engummangaliso entsonkothileyo yeetafile kunye neesahlulo. Andifuni ukuthatha ifoto kubaphuhlisi bam .NET, kodwa ndiyayibona rhoqo le nto ibuhlungu. Umphuhlisi omkhulu we-NET uya kuba nexesha elinzima lokufumana into, ke yena uphosa itafile ejikeleze kuyo ukuze kube lula.
Iitafile zedatha, ii-divs kunye neetayitile zezomxholo.
Cinga ngale ndlela-yenza ngathi ungumkhangeli we-injini yokukhangela kwaye uzama 'ukubona' ukuba ngowuphi umxholo okwiphepha eliluncedo kwisalathiso. Abakhasi bathatha isiqendwana sephepha… akukho mntu waziyo ukuba yeyiphi ipesenti, kodwa abalithathi lonke iphepha. Isicelo sakho sinekhowudi yokufomatha kakhulu kangangokuba kunzima ukufumana umxholo! Kwaye ngelixesha usenzayo, lisembindini wephepha. Olu hlobo luqheleke kakhulu kuphuhliso lweNET. Kwenza ukuba kube lula ukubhala isicelo, kodwa kunzima kubakhasi ukuba bafunde. Ukuba kukho naziphi na iindlela zokuba unike ingxelo ngenkqubo yakho yoLawulo lweMixholo, nceda ubazise.
Ngokwenyani bendifuna ukuthatha incopho kwi "Inikwe amandla yi iRise" ukufumana ulwazi oluthe kratya kodwa idityaniswe kwiphepha elingenanto.
Unamathegi eMeta ashukumisayo kumagama aphambili kunye neenkcazo kwiphepha. Ngelishwa, uninzi lweinjini zokukhangela azihlawuli kakhulu kwezi, kodwa azinakulimaza. Inkcazo yemeta yakho ifuna umsebenzi othile, nangona. Ukuba ndibone iphepha lakho lekhalenda liza njengesiphumo, inkcazo iya kuza njenge "Catalyze | Iziganeko ”. Andiqinisekanga ukuba uza kufumana uninzi lwabantu ucofa kuloo nto! Endaweni yoko ndingasebenzisa umhlathi wakho wokuqala, "Ikhalenda yomsitho weCatalyze ngumthombo opheleleyo wayo yonke imisebenzi? eyasekhaya okanye yesizwe? ezibangela umdla kubahlalutyi bamashishini nakumava abasebenzisi. ”
Akukho fayile yeerobhothi.txt kulawulo lwakho lweengcambu. Iifayile zeRobots.txt zivumela iiNjini zoPhando zazi ukuba ufuna indawo yakho ikhangelwe njani. Unokufumana itoni yolwazi kwiRobots.txt koku FAQ phepha.
Akukho sitemap.xml fayile kulawulo lwakho lweengcambu kwaye akukho fayile yeRobots.txt ukubonisa ukuba ikuphi. Isitshixo sokwenza ukuba indawo yokukhangela kwindawo yakho ibe nobubele yenza kube lula kwiiNjini zokuKhangela ukwenza imephu kwindawo yakho kwaye ufumane ukuba ziphi izinto. Imephu yendawo yinkqubo yenkqubo kwindawo yakho. Ngaphandle koko, ii-Injini zokuKhangela zinokukhangela indawo kuphela ngekhonkco… ndingazi okubalulekileyo nokuba indawo ihlelwe njani. Le inokuba yeyona nto ibaluleke kakhulu onokuyenza kwindawo yakho! Funda phezulu kwi Sitemaps.org
Ndiyathekela kule yokugqibela, kodwa ngenxa yokunqongophala kwezixhobo zokuphelisa umva zixhaswe kwiCatalyze, indawo yakho mhlawumbi ayisiyiyo iGoogle Blogsearch kunye neeNjini eziphambili zokuKhangela xa indawo yakho itshintsha okanye izithuba zebhlog zenziwe. Kwakhona, ayisiyiyo into yokuba indawo yakho ayizukufunyanwa, kodwa ukwazisa ngokufanelekileyo iinkonzo ezijikeleze umnatha akunakuze kukwenzakalise.
Unendawo enye, uTom, kodwa akukho mntu waziyo ukuba ikhona ngenxa yokusilela kwayo nayiphi na iNjini yokuKhangela. Jonga i-SEODigger kwindawo yakho kwaye uza kuphela kwi "Catalyze". Yonke loo mxholo uyinkcitho ngaphandle kokuba ungayifumana indawo enjini yokukhangela. Ukuba uyazibuza ukuba kutheni "uKhathalogu" ligama lakho eliphambili, jonga kwi ukujonga kwakhona kwindawo yakho kwaye uza kubona ukuba kutheni.
Intlahla egqibelele! Andiqinisekanga ukuba unayo imithombo yophuhliso yokwenza utshintsho okanye kuya kufuneka usebenze ngenkampani ephuhlise isicelo, kodwa mninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe.
tags: ukubhloga ibhlogiingcebiso zeblogiukukhathaza
Phila thanda hleka
Indlela endiyilungiselelwe ngayo iMbasa yokuSebenza
Okt 23, 2007 ngexesha 9:49 AM
Ewe! Iingcebiso zaziyinkqubela enkulu kwiblogi yam. Ngoku ndisebenza nzima ukufikelela kwii-2000 ezizodwa ngosuku.
Umsebenzi omhle Douglas!